Momba ny Trends Buddha
Ny Buddhatrends dia noforonina tao Montreal, Kanada mba hanolotra vehivavy avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao, ny fahafahana hijery hafa amin'ny vahoaka ary haneho tena amin'ny fomba tena izy amin'ny fomba niakanjoany.
Ny orinasa dia mino fa ny vehivavy dia mendrika ny hanao izay fomba fanao amam-pomba rehetra fantany ary afaka mahazo azy haingana amin'ny aterineto.
Boddhatrends koany iray-toeram-pivarotana ho an'ny maimaim-poana rehetra any ivelany:ny mpanakanto, ny mpitsidika, ny Bohemiana, ny hippies, ary ny vehivavy rehetraizay tsy mila mihoatrabut to mampiseho ny vibisany tsara amin'ny alalan'ny endriny tokana.Ny fanahy malalaka ao amintsika dia maniry ny fahafahana amin'ny zavatra rehetra ataontsika, indrindra fa ny fomba itondrantsika ny tenantsika. Inona no fomba tsara kokoa hanehoana ny tena maha-izy anao noho ny fomba fitafinao sy ny fomba fijerinao. Ny boddhatrends dia tsy fivarotana ho an'ny Wanderers fa fomba fitantanana ny fiainan'ny vehivavy maoderina izay mahafantatra ny fomba fanamboarana azy.
Amin'ny Buddhatrends, mino ny fahafahanao misafidy ny fomba fiainanao ianao, ary manome lanja ny fotoananao, ny fampiononana ary mazava ho azy. Noho izany, miresaka izao tontolo izao isika mba hitady ny vokatra tsara indrindra hanampiana ireo fanangonam-bokatsoa ho anareo, ireo singa izay mampiditra ny SPIRITS FREE. Izahay dia mamela fotsiny ireo vokatra izay mahaliana antsika noho ny maha-izy azy, ny fahaiza-manaony, ny maha-tokana azy ary ny fampiononana. Ny fanangonanay dia mikendry ny hampivelatra ny safidy ataonareo, nefa tsy hahita zavatra izay mifanaraka amin'ny lamaody mahazatra ao amin'ny Buddhatrends satria Mino ny maha-tokana anao izahay, fa mendrika ny safidy malalaka ianao ary mamorona ny fijery izay mifanaraka amin'ny toetranao!
Amin'ny maha-Fanahy maimaim-poana antsika, dia tapa-kevitra ny hitondra ny tena tsara indrindra ho anareo izahay.Mandeha mamakivaky ny fanangonam-bokinay izahay ary miziriziry amin'ny halalin'ny fitafy Overalls & Jumpsuits, flattering Plus Size Dresses, rongony Palazzo Pants ary Accessories mba hanehoana ny tena loko anao. Ny sangisangy voafantinay sasantsasany dia fofona avy amin'ny rivotra madio, tsy manam-paharoa sy manafaka tahaka ny tena marina. Ny Buddhatrends dia manolotra akanjo sy akanjo ho an'ny fotoana rehetra. Mifangaro ary milalao ary alaivo ny lamaody any amoron-dranomasina eny amin'ny arabe!
Ankoatra ny fanampiana anao hijery ny tsara indrindra amin'ny fomba tokana tokana, dia miezaka izahay mba hahatonga ny fividianana traikefa tsara ho anao. Ny laharam-pahamehantsika voalohany dia manome anao serivisy mpanjifa tena tsara, fanaraha-maso haingana dia haingana, fotoana fandefasana henjana, ary politikam-pivarotana tsy misy fiafarana.
Raha mpitsidika voalohany ianao, dia manasa anao amin'ny fo manontolo ary manantena fa ho faly amin'ny lafiny rehetra amin'ny fanandramanao amin'ny Buddhatrends ianao. Raha toa ianao ka mpanohana ary efa mpanjifa miverina dia mankasitraka anao izahay noho ny fanohananareo sy ny fitokisanay anay ary ny fanangonanay vokatra.
Isika dia manome lanja ny fanehoan-kevitrao, na mpanohana na mandamina ary miasa tsy tapaka mba hanatsara Ny traikefa niainanao niaraka taminay.
Fiadanana sy fitiavana,
Ny ekipa mpanohana ny Buddhatrends